‘तर अहिले तपाईंको अस्ट्रेलिया भ्रमण र जुलूस धेरैलाई मन परेको छैन’ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
‘तर अहिले तपाईंको अस्ट्रेलिया भ्रमण र जुलूस धेरैलाई मन परेको छैन’
प्रकाशित मिति : २०७६, २३ पुष बुधबार ०८:३६
जुलूस, ऱ्याली, कोणसभा, मार्चपास या दूतावासहरूमा भोजभतेर गरेर पर्यटक भित्राउन सकिन्छ भन्ने सोच बदल्नु पर्यो !
विदेश भने पनि एक दुई जना स्थानीय सांसद या मेयर बोलाएर सयपचास नेपालीको बीचमा ‘भव्य’ उद्घाटन, भाषण या जुलूस गरेर भ्रमण वर्ष सफल हुँदैन । नेपालमा झैँ ती मेयरले सरकारी पैसामा विदेश भ्रमण गर्न पाउँदैनन् ।
आठ लाख लक्ष्य हो, कति पूरा हुन्छ भन्ने यसै भन्न सकिन्न । आम्दानी भन्दा भ्रमणवर्षका नाममा हाम्रो विदेश भ्रमण, पर्चापम्पलेट र भोजभतेरको खर्च बढ़ी भयो भने त्यो फलदायी हुँदैन ।
-अबको एक वर्ष पर्यटन मन्त्री विदेशका दूतावासमा होइन, नेपालकै विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा भेटियून् । लामालामा पदयात्रादेखि स्थानीय जात्रासम्म उनी लो प्रोफाइलमा पुगून् । स्थानीय र पर्यटकहरू सँग अनुभव र रायसुझाब सङ्कलन गरून् ।
-आठ लाख पर्यटक कुन बाटो आउँछन् ? हाम्रो सपना ‘धनी देशका हवाइ पर्यटक’ हो जस्तो छ । अहिलेकै उडान पनि समय नपाएर आकाशमैं होल्ड हुन्छन् । तिनको सिट क्षमताअनुसार अहिले नै पनि ती प्रायः भरिएर आउँछन् । अब हाम्रो लक्ष्य भेट्न आवश्यक पर्ने हवाइ सिटदेखि एअरपोर्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्टसम्मका पूर्वाधारमा पनि त काम गर्न पर्यो । जहाँबाट खालि सिट बढ़ी आउँछन् त्यहाँ प्रचार केन्द्रित गर्न सकिन्छ ।
-एअरपोर्टको शौचालयदेखि बाटाको धुलो र होटेल या चियापसलमा हुने ठगीसम्म पर्यटकले धेरै कमेन्ट गरेका छन् । सोसल मिडियादेखि ट्रिप एडभाइजरजस्ता पर्यटन साइटमा नेपालसम्बन्धी तितामीठा अनुभव शेयर भएका छन् । तिनलाई लाखौं सम्भावित पर्यटकले पढ्छन् र धारणा बनाउँछन् । एउटा डेस्कलाई तिनमा एपोलोजीसहित उचित रेस्पोंस गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई सूचित गर्ने जिम्मा दिन सकिन्छ ।
-नेपालको हवाइ भाड़ा ज्यादै महँगो छ । आन्तरिक हवाइ यात्रा भरपर्दो छैन । कनेक्टिङ् फ्लाइट छ भने त आन्तरिक उड़ानको टिकट नै काट्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । कतिको फ्लाइट मिस भएर फेरि टिकट लिनुपरेको तीतो अनुभव पढ्न पाइन्छ । यसमा सुधार गर्न नीतिगत या व्यावहारिक होस्, रातदिन काम गर्न पर्यो ।
-भ्रष्टाचारले पनि पर्यटनमा नराम्रो असर गर्छ । फेक उद्धारका नाममा पर्यटकसँग लाखौं रुपियाँ असुलिने गरेको घटना विदेशी मिडियामा आए । तिनमा ‘यति’ ग्रुपका हेलिकप्टर कम्पनी मुख्य थिए । सरकारी निकायले कारबाही सिफारिस पनि गर्यो । तर कारबाही त टाढाको कुरा, उल्टै ती पुरस्कृत भए । यस्तो घटनाले देशकै छवि बिग्रिने हुनाले सतर्क र इमान्दार हुनुपर्यो ।
अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने, अहिले तपाईं अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले यो भयानक आगलागीप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता देखाउन नसकेको आरोपमा त्यहाँका एक सरकारी कर्मचारीले उनीसँग हात मिलाउन अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले दिएको हात फिर्ता गर्नुपर्यो । पक्कै नमज्जा लाग्यो होला तर उनले ‘सरी’ भने ।
उद्देश्य असल नै होला, तर अहिले तपाईंको अस्ट्रेलिया भ्रमण र जुलूस धेरैलाई मन परेको छैन । हाम्रो महाभूकम्पका बेला कुनै देशको मन्त्री उसको पर्यटन प्रबर्धन गर्न नेपाल आएको भए हामीलाई कस्तो लाग्दो हो ? तर तपाईंले ती टिप्पणीलाई विवेकपूर्ण रूपमा लिएर गल्तीबोध गर्नुभन्दा ‘गम्भीर रूपमा नियत खराब भएकाहरू’ भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । विनम्रता पनि नेतृत्वमा अत्यावश्यक गुण हो भन्ने स्मरण गराउँदै आगामी दिनका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु ।